Hogaamiyaha Burundi oo dib ugu laabtay dalkiisa, xilli dagaalo culus ay maanta ka dhaceen Bujumbura – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
14th May 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
May 14 (Mareeg)— Madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza ayaa dib ugu laabtay dalkiisa, iyadoo ciidamadiisa ay ku dhawaaqeen inay si buuxda u maamulaan meelaha muhiimka ee Caasimada Bujumbura, kadib dagaalo maanta ka dhacay.
Mr Nkurunziza ayaa dib ugu laabashadiisa Bujumbura ku sheegay bartiisa Twitter-ka, isagoo ka soo duulay dalka Tanzania oo uu ku sugnaa markii Jeneraalka ka tirsan Ciidamada Burundi uu ku dhawaaqayay afgambiga.
Waxaa jiray dagaalo culus oo ka dhacay magaalada Bujumbura, waxaana dagaalada ugu xoogan ay ka dhaceen xarunta Telefishinka iyo Raadiyaha dowladda, ugu yaraan shan askari ayaa la soo wariyay in dagaalada ku dhinteen
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Jeneraal Godefroid Niyombare, kaasoo shalay Idaacada iyo Telefishinka kaga dhawaaqay afgambiga.
Taliyaha Ciidamada difaaca Burundi ayaa isna sheegay inuu fashilmay isku dayga afgambiga, waxaana uu xusay in Jeneraalka iyo askartii kale ee afgambiga damacsanaa ay kala eryeen.
Ilaa iyo hada xaalada Caasimada Bujumbura ayaa ah mid qasan, waxaana wadooyinka ay maanta ahaayeen kuwo hawaanayay.
Qiic iyo uuro ayaa la arkayay, kuwaasoo laga arkayay hawada caasimada Bujumbura, iyadoo dagaalka la isu adeegsaday hub cul culus.